Wararka - Wasaaradda ilaalinta deegaanka ayaa si rasmi ah u hirgelisay heerarka cusub ee ilaalinta deegaanka ee alaabta guryaha
1dii Febraayo, Wasaaradda ilaalinta deegaanka ayaa soo saartay "shuruudaha farsamo ee alaabta alaabada lagu calaamadeeyo ee deegaanka (HJ 2547-2016)" si rasmi ah ayaa loo hirgeliyay, iyo "alaabta farsamada looga baahan yahay alaabada sumadda deegaanka" (HJ / T 303-2006) waa la baabi'iyay. .
Alaabta guryaha waxaa ku yaal calaamado lagu ilaaliyo deegaanka
Heerka cusub wuxuu qeexayaa shuruudaha iyo qeexitaannada, shuruudaha aasaasiga ah, waxyaabaha farsamada ku jira iyo hababka kormeerka ee alaabada alaabada sumadda deegaanka. Waxay ku habboon tahay qalabka guryaha, oo ay ku jiraan alaabada alwaaxda, alaabta birta ah, qalabka balaastigga ah, qalabka jilicsan, qalabka guryaha, dhalooyinka dhalada dhalada ah iyo alaabada kale iyo agabyada kale, laakiin heerka ma khuseeyo alaabada golaha. Waxaa la fahansan yahay in nooca cusub ee jaangooyuhu guud ahaan ka adag yahay, tiro ka mid ah shuruudaha ilaalinta deegaanka ayaa lagu daray. Ka dib hirgelinta heerka, alaabada guryaha ee la jaanqaadaya heerka waxay yeelan doonaan calaamadda ilaalinta deegaanka, taas oo muujineysa in badeecaddu aysan la kulmin oo keliya heerarka wax soo saar ee tayada iyo amniga, laakiin sidoo kale ay la kulanto shuruudaha ilaalinta deegaanka ee qaranka ee habka wax soo saarka. isticmaalna.
Heerka cusub wuxuu kordhiyaa shuruudaha alaabta ceeriin ee maqaar iyo maqaar macmal ah, wuxuu kordhiyaa shuruudaha soo kabashada qashinka iyo daaweynta habka wax soo saarka, wuxuu hagaajiyaa shuruudaha xadka walxaha waxyeelada leh ee ku dahaadhan alwaax ku saleysan dareeraha, wuxuuna kordhiyaa shuruudaha xadka walxaha la wareejin karo iyo phthalates ee alaabada.
Heerka cusub wuxuu qeexayaa dhowr faahfaahin
Heerka cusub wuxuu u baahan yahay in habka wax soo saarka, shirkadaha wax soo saarka alaabta guryaha ay tahay inay aruuriyaan oo ay daweeyaan qashinka ka dhashay kala soocista; si wax ku ool ah u ururiya oo u daaweeya boodhka iyo boodhka iyada oo aan dheecaan toos ahi ka soo bixin habka dahaadhka, waa in la qaadaa tallaabooyin wax ku ool ah oo lagu ururinayo gaaska isla markaana la daaweeyo gaaska qashinka la ururiyey.
Qaadashada shuruudaha ilaalinta deegaanka ee sharaxaadda sheyga tusaale ahaan, sharaxaadda alaabada ee ku qeexan heerka cusub waa inay kujirtaa: heerka tayada alaabta iyo heerka kormeerka uu kusalaysan yahay; haddii alaabta guriga ama qalabku u baahan yihiin in la soo ururiyo, waa inay jiraan tilmaamaha isku imaatinka ee jaantuska; tilmaamaha ku saabsan nadiifinta iyo dayactirka alaabada qalab kala duwan habab kala duwan; qalabka loo isticmaalay badeecada iyo kuwa waxtar u leh bey'ada dib u warshadaynta iyo qashinka.